UMiguel Angel Buonarotti. Iindinyana zengqondo kunye nembongi | Uncwadi lwangoku
Miguel Ángel Buonarroti, nguDaniele da Volterra. Ingcwaba likaMichelangelo kwiCawa laseSanta Croce eFlorence.
Miguel Bungel Buonarroti, yenye yezona ngqondi zibalaseleyo kwindalo iphela, kudlule kubabalo lukanaphakade ngokuchanekileyo kwisiXeko esingunaPhakade usuku njenganamhlanje ngo-1564. Ingaba u ubuninzi bokukhupha ukusuka kuluhlu olude lweengqondi awazinikayo Ukuhlaziywa kweNtaliyane. Umyili wezinto, umzobi kwaye, ngaphezu kwako konke, umkroli, tWayeyimbongi ethandekayo. Kwaye kulolohlobo ndifuna ukumkhumbula ngezi zinto iivesi.
Ilifa lakhe lobugcisa alinakuthelekiswa nanto. Akunakwenzeka ukuba ungamangaliswa nguDavid wakhe, uPieta wakhe, uMoses wakhe okanye imizobo emihle kwi-Sistine Chapel eVatican. Kodwa yingqondi kaMichelangelo tWayephumelele nakwimibongo. Wayenomdla kwaye eyingcali kuyo Udidi oluvela kuThixo, de Dante, awayebabhalela imibongo. Uye waqamba iivesi ezikrakra ekhalaza ngomsebenzi odinisayo obandakanyekayo kwikhomishini yokuhombisa iSistine Chapel.
Kodwa izifundo zakhe azithandayo luthando, ubuhle, ukufa, uThixo, ubomi kunye nesono, kunye nayo nayiphi na into eyayithetha uvuyo nolonwabo. Kwezabo iisonethi umxholo ophambili luthando oluninzi ngethoni yePetrarchan yeevesi ezikrakra, ezikhathazayo kunye nezothusayo. Ezi zezinye zazo neminye imibongo.
Imibongo kunye neesonethi
Amehlo am, anqwenela izinto ezintle
njengoko umphefumlo wam ulangazelela impilo yakho,
ukuba isibhakabhaka sinqwenela, ukuba ujonge ezo.
Ukusuka kwiinkwenkwezi eziphakamileyo
oko kukhuthaza ukubalandela
kwaye apha kuthiwa luthando.
Intliziyo ayifumani nto ingcono
menze athande, atshise kwaye acebise
ngamehlo amabini afana neenkwenkwezi ezimbini.
Akanaye umculi obalaseleyo okanye umbono
ukuba ibhastile ngokwalo ayijikelezi
ngaphezulu, kodwa kuphela kwezi zingasentla
isandla esithobela ubukrelekrele.
Ububi endibalekayo kunye nokulungileyo endikuthembisayo,
kuwe, mhle, unguthixo, inenekazi elinekratshi,
izikhumba ezifanayo; kwaye kutheni ungasaphili,
Ngaphandle koko ndinobugcisa kwisiphumo esifunekayo.
Ayinayo, ke, Uthando okanye ubuhle bakho
okanye ubunzima okanye ithamsanqa okanye ukuphambuka okukhulu
ityala lobubi bam, isiphelo okanye ithamsanqa;
ukuba entliziyweni yakho ukufa nenceba
uthatha ixesha, ubuncinci bam
ayazi, iyatsha, kodwa kukuzoba ukufa apho.
Ndibona ngamehlo akho amahle ukukhanya okumnandi,
Ukuba nabantu bam abaziimfama andiboni;
Ndithwala iinyawo zakho ubunzima, buqhotyoshelwe,
Yeyiphi eyam ayisengokwesiko.
Ndibhabha ngamaphiko akho angenazintsiba;
Ngengqondo yakho ezulwini ndihlala ndinqwenela;
Ngokuthanda kwakho ndimhlophe kwaye ndibomvu,
Kuyabanda elangeni, kufudumele kwezona ndawo zibandayo.
Kuthando lwakho kukho okwam kuphela,
Iingcinga zam entliziyweni yakho zenziwe,
Ngomoya wakho amazwi am.
Njengoko inyanga ngokwayo ibonakala ngathi;
Okokuba amehlo ethu esibhakabhakeni abona akazi
Kodwa leyo ikhanyisa ilanga.
Ukubuyela apho ivela khona,
umphefumlo ufikelela emzimbeni wakho
ingelosi yenceba igcwele
ephilisa ubukrelekrele kwaye iwonga umhlaba.
Ilanga liyanditshisa kwaye lindixhwile,
hayi ubuso bakho obuhle ngaphandle.
olo thando alunathemba kwizinto ezidlulayo
ukuba isidima asilawuli kuye.
Kuyafana nakwabaphezulu kunye nabatsha,
apho indalo iprinta khona isitampu sayo kunye
idityanisiwe ivela ezulwini;
kananjalo uThixo akazibonakalisi, ngobabalo lwakhe, kungenjalo
ngaphezu kwesigqubuthelo esibulalayo nesintle;
kwaye ndiyamthanda, ilanga, kuba liyabonakala kuye.
Wehla ezulwini, kwaye sele ekufeni, emva koko
ngubani owabona isihogo esilungileyo kunye nomntu ohlonela uThixo,
Ephila wabuya ukucinga ngoThixo,
ukusinika ukukhanya okuyinyani kwayo yonke into.
Inkwenkwezi ekhanyayo, leyo kunye nemitha yayo
yenziwa yacaca, ngaphandle kwesizathu, indlwane endazalelwa kuyo,
lonke ihlabathi elibi aliyi kuba yimbasa kuye;
Nguwe kuphela, oyidalile, onokuba njalo.
NgoDante ndiyathetha, indlela yakhe engaziwa kakuhle ngayo
Imisebenzi yayiyeyabantu abangenambulelo
kukuba kuphela amalungisa athintela okuhle.
Ndinqwenela ukuba ibinguye!
ngokuthinjwa kwakhe ngokuqatha kunye nobuhle bakhe,
Ndinganika esona sikhundla sonwabileyo emhlabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » UMiguel Ángel Buonarotti. Iivesi zengqondi kunye nembongi
Ababhali abazipapashayo abaphumelela abafundi.